China YASKAWA ZOKUZOBA ROBOT MOTOMAN-EPX1250 mveliso kunye nabenzi | Jiesheng
Inkqubo ye- IIMOTO-EPX uthotho Iirobhothi zaseYaskawa ubume besandla obulungele umsebenzi, ingalo enemibhobho eyakhelweyo, kunye nekhabhathi yolawulo olusebenzayo, njl. njl., ukuphumeza imisebenzi yokutshiza esemgangathweni. Uthotho lwe-EPX lunemveliso etyebileyo, kwaye kukho iirobhothi ezingqinelanayo zemisebenzi emikhulu kunye nemincinci, enika abasebenzisi ukhetho olungakumbi.
IMOTOMAN-EPX1250, irobhothi encinci yokutshiza nge I-6-axis nkqo yokudibanisa ngokudibeneyo, ubunzima obukhulu bungu-5Kg, kwaye owona mgangatho uphezulu yi-1256mm. Kufanelekile kwikhabhathi yolawulo ye-NX100 kwaye isetyenziselwa ukutshiza, ukuphatha kunye nokutshiza izinto ezincinci zokusebenza, ezinje ngeefowuni eziphathwayo, izibonakalisi, njl.
Iinkcukacha zobugcisa ze Ukutshiza iRobhothi :
110Kg 1.5kVA 185 ° / umzuzwana 185 ° / umzuzwana
185 ° / umzuzwana 360 ° / umzuzwana 410 ° / umzuzwana 500 ° / umzuzwana
Ipeyinti yokutshiza iirobhothi Ziqhutywa ngokubanzi ngombane kwaye zineempawu zentshukumo ekhawulezileyo kunye nokusebenza kakuhle kokudubula. Ukufundisa kunokufezekiswa ngokufundisa ngesandla okanye ngomboniso.Ukudweba iirobhothi Zisetyenziswa ngokubanzi kumasebe emveliso yobugcisa anjengeemoto, iimitha, izixhobo zombane kunye ne-enamel. Inqanaba lokuqhushumba liyahambelana neJapan TⅡS, FM, ATEX, kunye nokhuseleko lwemveliso luqinisekisiwe.
Incinci ukutshiza irobhothi MOTOMAN-EPX1250 Ibona uluhlu olubanzi lweentshukumo kunye nesakhiwo esihambelanayo. Indlela yofakelo yasimahla kunye nekhabhathi encinci yolawulo inegalelo ekugcineni indawo kwigumbi lokutshiza. Ingafakwa ngombhobho wokujikeleza ojikelezayo omncinci, ngaloo ndlela kufezekiswe umgangatho wokutshiza, ukuphucula umgangatho wokutshiza kunye nokusetyenziswa kwezinto.
Egqithileyo IYASKAWA ephethe irobhothi MOTOMAN-GP225
Okulandelayo: I-YASKAWA AUTOMOBIL yokutshiza i-robot MPX1150
Ukupeyinta iirobhothi kwishishini
Umatshini wokuPenda weRobotic
Inkqubo yokupeyinta iRobotic
Ukutshiza iZicelo zeRobot
Ukuphathwa kweMizi-mveliso yeRobhothi, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Ukuphathwa kweRobothi yeAxis, Iinkqubo zokuphatha izixhobo zeRobotic, Ukuphatha ingalo yeRobot, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo,